Saddex abaalmarin oo Emmy ah oo maalinle ah oo Apple TV ah + taxanaha carruurta | Waxaan ka socdaa mac
Tan iyo markii Apple TV + la bilaabay, Apple marwalba waxay u ololeysaa tayada waxyaabaha. Dhanka kale, qadarka ayaa wali muuqda iyadoo maqnaanshihiisa. Laakiin dabcan tayada ayaa jirta oo hadaan loo oggolaan inay u sheegaan Ted Lasso oo durba ku jira xilli ciyaareedkiisii ​​labaad waxaana hubaal ah inuu heli doono abaalmarino badan sida tii ugu horreysay. Isla sidaas ayaa ku dhacday qaar ka mid ah taxanaha carruurta ee laga helo kanaalka. Iyaga ayaa lagu abaal mariyey Abaalmarinta Emmy Daytime.
Apple TV waxay kasbatay abaalmarino dheeri ah, waxayna sii wadaa aruurinta abaalmarinta barnaamijkeeda carruurteeda mawjadda labaad ee Abaalmarinta Emmy Daytime la soo bandhigay Sabtidii la soo dhaafay. Si toos ah u baahinta, qeybtii hore ee XNUMX-aad ee Maalintii Emmy Abaalmarinta oo diiradda lagu saaray barnaamijyada carruurta iyo animation. Filimka "Halkan Aynu Joognaa: Qoraallada Nolosha Dunida" waxay ku guuleysatay magacaabisteeda "Barnaamijka Heer Gaarka ah ee Maalinlaha ah ee Fasalka Gaarka ah."
«Biyo wali"Riwaayad baraysa miyir qabka oo lagu daray Abaalmarinta Peabody iyada oo lagu guuleystay 'Editing Editing for Animated Preschool Show,' in kasta oo ay heshay magacaabis dhowr qaybood oo kale ah oo ay ku guuldareysatay inay guuleysato. Caawiyayaashu sidoo kale waxaa lagu sharfay magacaabis dhowr qaybood ah, laakiin ugu dambeyntii way ku guuldareysteen inay helaan abaalmarin. Baahinta Sabtida waxay ahayd tii labaad ee seddex xafladood oo Emmy ah oo loogu talagalay 2021, ka dib markii la sii daayay Juun 25.
Dabcan, Apple TV + halka ay u socoto, way guuleysaneysaa. Waxaan ula qabsaneynaa taxanaha jira ee Apple Tv + helitaanka abaalmarino iyo abaalmarino. Sanadkii hore wuxuu horey u helay abaalmarino lamid ah kan sanadkaanna markale ayuu helayaa. Xaqiijinta in tayadu sii socoto iyo inay hubaal sii socon doonto sannadba sanadka ka dambeeya. Gaar ahaan isbeddelada ku dhacay shaqaalaha gacanta ku haya Apple Tv +.
Waxaan noqon doonaa dhegeysi abaalmarinta mustaqbalka taas oo ay heli karaan qeybta madadaalada ee Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Saddex Abaal Marin Maalinle ah Emmy oo loogu talagalay Apple TV + Taxanaha Carruurta
Hayso darawalkaaga adag ee adag ee 'Mac' mahadnaqa BuhoCleaner